Ioli yeentlanzi ekulahlekeni kwesisindo: inkolelo okanye inyaniso? Uhlalutyo lobunjwa, iingcebiso malunga nokukhethwa kunye nokusetyenziswa kwemali.
Ioli yeentlanzi ekulahlekeni kwesisindo
Wonke umntu uyazi malunga neenzuzo zeoli yeentlanzi. Ioli yeentlanzi iqukethe i-omega-3 fatty acids, i-phosphorus, iodine, iivithamini kunye nezinye izinto ezincedo. Esi sidakamizwa simiselwe wonke umntu: abantwana, abadala, abantu abadala. Kusetyenziswa ukukhusela nokuphatha izifo ezithile. Ukongezelela, ioli yeentlanzi inceda ekulahlekeni kwesisindo.
Sitshisa ngamafutha ngokuchanekileyo
Yonke intombazana iyayazi ukuba kunzima kangakanani ukulahla iifowuni ezinqeni, izibilini, isisu. Ngamanye amaxesha izidlo eziqinileyo kunye nokuzilolonga asikwazi ukunika iziphumo ezifunwayo. Ngaphandle kokuba bekwazi ukulahla iiksilo ezimbalwa, babuyela ngokukhawuleza. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukunciphisa umzimba ngokuchanekileyo. Kubalulekile ukukhetha indlela yokulahleka kwesisindo, okuya kuzinzisa imetabolism emzimbeni.
Bambalwa abantu bayazi ukuba xa usebenzisa ioli yeentlanzi ulawula ukulahlekelwa isisindo ngokukhawuleza kunokuba ukuba, umzekelo, wanikela i-carbohydrates okanye ukutya kweprotein. Ngokuqinisekileyo, umntu akanako ithemba lokuba ngokusebenzisa le mveliso ungadla yonke into kwaye ngexesha elifanayo unciphise ubunzima kwiiveki ezimbalwa. Kufuneka ufikelele kwinkqubo yokulahlekelwa isisindo ngokuchanekileyo. Ukwenza oku, thabatha ioli yeentlanzi, usebenzise umzimba kunye nokutya ngokufanelekileyo.
Izinga lemihla ngemihla
Namhlanje, oogqirha abaninzi abavumelani nantoni na imini yokutya ioli yeentlanzi. Ngokomzekelo, i-American Association ithi i-day ilingadli ngaphezu kweesigremu ezimbini. Le nombolo ayanele ngokwaneleyo. Ezinye iingcali zithi umntu kufuneka adle igram enye kwipesenti zamanqatha angaphantsi. Kodwa oko kuninzi. Ukongezelela, ukugqithisa kwamavithamini kunokukhokelela kwi-hypervitaminosis. Ngoko ke, ukuze uzikhethele ngokufanelekileyo i-dose yansuku zonke yile chiza, qhagamshelana nogqirha.
Ukuba umzimba wakho awukho ngaphezu kwamakhilogremu angaphezu kwamashumi amabini, ngaloo mini kufuneka udle iigramu ezimbini zeoli yeentlanzi phambi kwesidlo ngasinye. Oko kukuthi, malunga neesithandathu amagremu ngosuku kuya kukhutshwa. Nangona kunjalo, izinga elichanekileyo kufuneka libalwe kwiimfuno kunye ne-physiology yomzimba.
Ukuba uhola impilo ephilileyo, hamba umoya omtsha, uphume kakuhle, usebenzise umzimba, uthathe iityela zeentlanzi, ungalahlekelwa iikhilogram ezine ngenyanga. Kule meko, akudingeki ukuba ungabandakanyi ngokupheleleyo ekudleni kokutya kunye ne-high-calorie food.
Lumkele kakhulu. Ungalokothi uthabathe eli gulana kwisisu esilambileyo, njengoko kunokubangela ukunyanzelisa. Kwakhona akunakwenzeka ukuba adle ioli yeentlanzi rhoqo. Sidinga ukuthatha ikhefu. Ubude bekhosi yonyaka omnye luyiintsuku ezingamashumi amathathu. Emva koko, kufuneka uchithe ikhefu ezine iinyanga.
Ngubani ocebisa ukuba adle ioli yeentlanzi?
Kunconywa ukusebenzisa ioli yeentlanzi ngamaxesha onke, kungekhona kubantu abadala kuphela, kodwa nakwabantwana. Nangona kunjalo, eli liza lilincedo kakhulu ebusika, xa umntu ehlala ehlushwa yi-vitamin, kodwa udla imifuno encinane kunye neziqhamo kwaye usebenzise ukutya okuninzi okunamafutha, izitya zenyama kunye njalo. Kule mveliso, asikwazi ukufumana zonke izinto eziyimfuneko. Ngoko ke, ioli yeentlanzi iya kuba ngumncedisi oyimfuneko. Akayi kuvumela kuphela ukuyeka iikhalori ezingaphezulu kweekali, kodwa ukuzalisa umzimba kunye namavithamini kunye nezinto ezinokunceda.
Kananjalo, oogqirha bancomela ukusebenzisa le mveliso kubantu abaneengxaki zokujonga amehlo, amazinyo. Incedo ngokukhethekileyo ioli ye-food ye-food ye-intombazana enesibhokhwe sokuqhafaza, izinwele ziphuka kunye nekhefu, kunye nezikhumba zesikhumba.
Ukungqinelana nokusetyenziswa kweoli yeentlanzi
Ukuba uthatha isigqibo sokuthabatha ioli yeentlanzi ekulahlekeni kwesisindo, ngoko-ngaphambi kokubonisana nodokotela wakho. Eli liyeza alinakusetyenziswa ngabantu abaneengxaki ze-thyroid, izintso, kwaye abanako ukuthathwa ngabantu abanesifo sofuba okanye abanokugqithisela i-vitamin D emizimbeni yabo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba le mveliso inokubangela ukuba umonakalo omkhulu. Uninzi lwamaxesha amaninzi, i-oilergy yokuloba ioli ifumaneka kulabo bantu abangenako ukunyamezela iimveliso zolwandle. Ukuba emva kweeyure ezimbalwa emva kokuba uthathe le nyilisi uza kuziva udizzy, i-nauseous, kuya kubakho ukugqithisa okanye ukubetha emzimbeni, ngokukhawuleza ukuyeka ukuthatha ioli yeentlanzi. Ukuba iimpawu ziqhubeka imihla yonke, qhagamshelana nodokotela ngokukhawuleza ukuze ugweme imiphumo emibi.
Kuphela kwimiyalelo yesigqirha kwizilwanyana ezincinci kuvunyelwe ukuthatha ioli yeentlanzi kubantu abanentliziyo, isisu, isibindi okanye izifo zamathumbu. Kananjalo uqaphele, eli liza kufuneka lithathwe ngabasetyhini kunye nabasetyhini abasetyhini.
Kwindawo yokubeka ingozi zigulane ezixinzelelekileyo. Ukuba ayichangekanga kakuhle, ioli yeentlanzi inokunciphisa uxinzelelo lwegazi. Awukwazi ukudibanisa ioli yeentlanzi kunye nezinye iivitamin complexes okanye imishanguzo, kuba isabela esingaqinisekanga senzeke. Kwiimeko ezinzima, kufuneka udibane nodokotela.
Indlela yokukhetha ioli yeentlanzi
Kubonakala ngathi akukho nto kulula kunokuba ukhethe ioli yeentlanzi. Nangona kunjalo, umntu makangacingisise ukuba leliyeza. Kwaye amayeza abavelisi abahlukeneyo anokufumana iziphumo ezahlukeneyo emzimbeni wethu. Inkampani nganye inokwenza iteknoloji yokuvelisa iipilisi ngeoli yeentlanzi. Yaye akubona bonke ubuchwephesha obuqinisekisa umgangatho ophezulu. Ngoko ke, xa uthengwa, qi ni sekise ukuqwalasela:
Kwisicelo sakho kunoma iyiphi ikhemisi kufuneka unike isatifiketi seyeza, eqinisekisa ubungqina beemveliso kunye nokusemthethweni kokuphunyezwa kwayo. Isiqinisekiso kufuneka sibonise ukuba yintoni ioli yeentlanzi iqukethe: ukubunjwa okuyisiseko, izinto kunye nezongezo.
Ukupakisha kunye nokubhaliweyo
Qinisekisa ukuthatha ipakethe ngeoli yeentlanzi uze ufunde konke okubhalwa kuyo. Umenzi ngamnye kufuneka achaze ukubunjwa, injongo, iimpembelelo kunye nezinto ezinjalo. Nokuba oko iifomsules kunye neziyobisi zenziwe, inendima ebalulekileyo, zombini kwiindleko zemveliso kunye nokusebenza kwayo. Ngokomzekelo, intlanzi ye-gelatin ibhetele ngakumbi kwaye iyabiza kunegelatin yezilwanyana.
Ngokubhekiselele kwiphakheji ngokwayo, ukukhetha kwayo kukunika loo mveliso epakishwe kwintsimbi yeglasi eyenziwe ngeglasi emnyama. Into yokuba imisebe yelanga inefuthe elibi kwi-Omega-3 fatty acids, efumaneka kwioli yeentlanzi. Kwakhona, imbiza kufuneka ivalwe ngokuqinile.
Ngokudumileyo umenzi, iimveliso zayo zibiza kakhulu. Wonke umntu uyazi oku. Kodwa, njengommiselo, ngabavelisi abaziwayo abavelisa iimveliso ezingcono.
Qinisekisa ukuba uqaphele umhla wokuphela kwesilwanyana. Ngokomyinge, impilo yeshefu yeoli yeentlanzi yiminyaka emibini ukususela kumhla wokuvelisa. Akunjalo na ukuba ungayisebenzisi le nkunkuma xa ithe yadlula. Bayazinyonyana ngokwabo. Ngoko ke, ukuthenga amanqatha, qi ni sekise ukuba unayo ixesha lokuyisebenzisa kuze kube ngumhla wokuphela.
Njengoko ubona, ioli yeentlanzi inceda kakhulu. Ingasetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo: ukuphucula umzimba, ukunyanga izifo ezithile, ukukhusela ukungabikho kwe-vitamin. Kwaye ngokubaluleke kakhulu - ngoncedo lweoli yeentlanzi unokukrazula iipilisi ezimbalwa. Nangona kunjalo, ungakhohlwa ukuba ukuze ulahlekelwe isisindo, akwanele ukusela kuphela ioli yeentlanzi. Kuyimfuneko ukukhokela impilo yokuphila, usebenzise umzimba kwaye udle ngokufanelekileyo.
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kunye nama-hemorrhoids
I-anyanisi eluhlaza: izakhiwo ezixhamlayo
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo kunye ne-dysbiosis
Imveliso efanelekileyo kwimiboniso
I-tea eneinti, iimpawu zonyango
I-chic yaseNtaliyane: I-Mezzatorre ye-Fall 2016 iqoqo
I-Fashionable TOP-5: Iibhatyi ezitshintshiweyo zobusika 2016-2017
Izicwangciso zeenwele zasekhaya. Recipes
Imimangaliso yokulayishwa kweentsuku ze-kefir
I sandwich nge sprats
Indlela yokufumana umsebenzi ngaphandle
I-Hedgehogs kwi-oven nge-sauce enomdli
Umdlali owaziwayo uSalma Hayek
Ezilishumi zezona ziqulatho kunye neenkozo ezininzi zeRashiya
Umzimba wesiFrentshi womtshato
Yiyiphi enye into efanelekileyo yokukhulelwa umntwana?
Xa u-Kurban Bairam ngo-2015: amaSilamsi
Indlela yokwenza umntwana abe yinkokeli yeklasi?